अपराध अनुसन्धानमा किन चुक्दैछ प्रहरी ? (भिडियो) | ImageKhabar <!-instant articles-->
अपराध अनुसन्धानमा किन चुक्दैछ प्रहरी ? (भिडियो)
काठमाडौं, भदौ २७ । विगतमा निकै जटिल र अप्ठ्यारा अनुसन्धानमा सफल मानिँदै आएको नेपाल प्रहरी पछिल्लो समयमा कमजोर देखिन थालेको छ । मुलुकमा पछिल्लो समयमा भएका केही अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी संगठन चुक्न थालेको हो ।
बहुचर्चित साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरी संगठन चुकेको छ । यो घटनामा प्रहरी संगठनका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै मुछिएका छन् । साढे ३३ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान मोरङ प्रहरीबाट सुरु हुँदै गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छनबिन समिति, त्यसपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा पुगेको छ । तर वास्तविकता अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी पूर्वराजदूत केशवराज झाको हत्याको घटना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रहरीले त्यसका दोषी किटान गर्न सकेको छैन । शान्ति सुरक्षा निकै मजबुद मानिएको राजधानीकै केन्द्रमा राजदूत झाको हत्या भएको विषयमा प्रहरी संगठनले दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा उसको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठेको छ ।
त्यसैगरी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाका विषयमा त प्रहरी संगठन झन् आलोचित हुन पुगेको छ । निर्दोषलाई पक्राउ गरेको र वास्तविक अपराधीलाई जोगाउन प्रहरी संगठन नै लागेको आरोपसमेत लागेको छ । दोषी भनेर प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई प्रमाण पु¥याउन नसक्दा उसलाई छोड्नसमेत प्रहरी बाध्य भएको छ ।
यी घटनालाई हेर्दा केही वर्षअघिसम्म अपराध अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तर मै अब्बल मानिने नेपाल प्रहरीको कार्यकुशलता पछिल्लो दिनमा खस्कँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । प्रहरी संगठनभित्र हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाब र अनुसन्धानको परम्परागत शैलीकै कारण प्रहरी संगठन चुक्दै गएको हो ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंह छानबिन समिति गठनमै त्रुटि र सरकारी गल्तीकै कारण प्रहरी संगठन कमजोर हुन थालेको बताउँछन् ।
एउटा घटनाको अनुसन्धान गर्न विभिन्न निकायबाट बेग्लाबेग्लै समिति गठन हुनु, टोलीहरुबीच समन्वय नहुनु र राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गरिनुलगायतका विषयले पनि प्रहरी अनुसन्धानमा समस्या पर्ने गरेको छ ।
एउटा समितिले गरेको अनुसन्धान पूरा नहुँदै अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्दासमेत अपराधका घटनालाई निचोडमा पु¥याउन हम्मेहम्मे हुने गरेको छ । नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिला त राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ । उसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिसमेत उपलब्ध गराइ नेपाल प्रहरीलाई पुनः अपराध अनुसन्धानमा अब्बल सावित गराउन लाग्नुपर्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा भने प्रहरी संगठनप्रति नागरिकले राखेका अपेक्षा पूरा हुन छाँट देखिँदैन ।